မလေးရှား-သြစတြေးလျ ဒုက္ခသည် သဘောတူညီချက် ဝေဖန်ခံရ | AAR - သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးဌာန
← သက်စွန့်ဆံဖျား ကြိုးစားထွက်ပြေးခဲ့ပေမယ့် မလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ ဒုက္ခသည်
ထိုင်းနယ်စပ် ဒုက္ခသည်စခန်း ၂ ခု အ၀င်အထွက် ပိတ်ပင်မည် →
မလေးရှား-သြစတြေးလျ ဒုက္ခသည် သဘောတူညီချက် ဝေဖန်ခံရ
မလေးရှားနိုင်ငံနှင့် သြစတေးလျနိုင်ငံမှ ဝန်ကြီးချုပ်များအကြား ဒုက္ခသည်အဖြစ် ခိုလှုံလာသူများအား ဖလှယ်ရေးအစီအစဉ် သဘောတူစာချုပ်ကို နှစ်နိုင်ငံ ဥပဒေပြု လွှတ်တော်အမတ်များက ဆန့်ကျင် ကန့်ကွက်လိုက်သည်။
၂၀၁၁ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့က အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အာချေးခရိုင်တွင် ကယ်တင်ထားသော ပင်လယ်ထဲတွင် လှေဖြင့် မျောနေခဲ့သည့် ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ မြန်မာ-မူဆလင်များ (ဓာတ်ပုံ – Reuters)
မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ် နာဂျစ် ရာဇတ်နှင့် သြစတေးလျဝန်ကြီးချုပ် ဂျူလီယာ ဂီလ်လတ် တို့နှစ်ဦးကြား မေလ ၇ ရက်နေ့တွင် ချုပ်ဆိုခဲ့သော ယင်း သဘောတူစာချုပ်အရ စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးနောက် သြစတြေးလျသို့ ခိုလှုံရန် စတင်ရောက်ရှိလာမည့် ဒုက္ခသည် ၈၀၀ ကို ကုလသမဂ္ဂ တာဝန်ရှိသူများက လိုအပ်သည့် စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ရန် သြစတေးလျမှ မလေးရှားသို့ ပို့ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။
အပြန်အလှန်အနေဖြင့် သြစတေးလျနိုင်ငံသည် လာမည့် ၄ နှစ်အတွင်း မလေးရှား၌ ဒုက္ခသည်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံရပြီးသူ ၄၀၀၀ ကို လက်ခံပေးမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းဒုက္ခသည်များအနက် အများစုမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှ ဖြစ်သည်။
မလေးရှားနှင့် သြစတြေးလျတို့၏ သဘောတူစာချုပ် ရည်ရွယ်ချက်မှာ သြစတြေးလျတွင် ခိုလှုံခွင့်ရရန် လှေဖြင့် ခိုးဝင်သူများကို တားဆီးရန်ဖြစ်သည်။ ခိုးဝင်သူ အများစုမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှ လာသည့် နိုင်ငံသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခြင်း မခံရသော ရိုဟင်ဂျာများဖြစ်သည်။
မလေးရှားနိုင်ငံသည် ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတခု မဟုတ်ခြင်း၊ ခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထားသူများနှင့် ပတ်သက်၍ ကိုင်တွယ်ရာတွင် အလွန်ဆိုးဝါးသော မှတ်တမ်းများ ရှိနေခြင်းတို့ကြောင့် သြစတြေးလျသည် သဘောတူ စာချုပ်အတွက် နှစ်နိုင်စလုံးမှ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံရေးသမားများ၏ ပြစ်တင်ဝေဖန်မှုကို ခံနေရသည်။
ပြစ်တင်ဝေဖန်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သြစတေးလျ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီး မစ္စတာ ခရစ္စ ဘိုဝင် (Chris Bowen) က သြစတေးလျ ABC သတင်းဌာနသို့ မေလ ၉ ရက်နေ့က ပြောကြားရာတွင် မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်က ခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထားသူများ၏ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် လူသားဖြစ်တည်မှုကို လေးစားလိုက်နာရန် အခိုင်အမာ ကတိက၀တ်ပြုထားကြောင်း၊ သဘောတူညီချက်ပါ အသေးစိတ် အချက်အလက်များ အပြီးသတ်သည်နှင့် တပြိုင်နက် အကောင်အထည်ဖော်မည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောသွားသည်။
သို့သော် မလေးရှားလွှတ်တော်မှ အမျိုးသမီး အမတ် ထရီဆာ ကွတ်ခ်က (Teresa Kok) မလေးရှား ၀န်ကြီးချုပ်၏ ကတိစကားကို ယုံကြည်မှုမရှိကြောင်း၊ အစိုးရ ကျောထောက် နောက်ခံ ပြုထားသော Rela ဟုခေါ်သည့် တရားမ၀င် နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမား နှိမ်နင်းရေး အဖွဲ့ဝင်များက ဒုက္ခသည်များအပေါ် ကျူးလွန်သည့် အနိုင်ကျင့်မှု၊ ငွေညှစ်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှုများကို သက်သေ အထောက်အထားများနှင့် မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ မလေးရှား အစိုးရကလည်း ယခုအချိန်အထိ မသိကျိုးကျွံ ပြုနေဆဲဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။
ASEAN Inter-Parliamentary Myanmar Caucus (AIPMC) ခေါ် မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီရရှိရေး ဆောင်ရွက်သည့် အာဆီယံ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ကို တွဲဖက်တည်ထောင်သူလည်း ဖြစ်သည့် ထရီဆာ ကွတ်ခ်က “ဒီသဘောတူညီချက်က နေရပ်အိုးအိမ်တွေကို စွန့်ခွာထွက်ပြေး လာရတဲ့၊ တိုင်းပြည်မဲ့နေကြတဲ့ လူသားတွေကို အကာအကွယ်နဲ့ လုံခြုံမှု ပေးရမယ့်အစား ရောင်းကုန်ပစ္စည်းလို သဘောထား နေပုံရပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။
“တကယ်လို့သာ ၀န်ကြီးချုပ် နာဂျစ် အနေနဲ့ ဒုက္ခသည်တွေအတွက် အမှန်တကယ် စိတ်ပူပန်တယ်ဆိုရင် အခု သဘောစာချုပ်ကို ဖျက်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် မလေးရှားနိုင်ငံထဲမှာ ခိုလှုံနေတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကို အကာအကွယ်ပေနိုင်မယ့် နိုင်ငံတော်အဆင့် ဥပဒေနဲ့ စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစည်းမျဉ်းဘောင်တခု ချမှတ်နိုင်ဖို့ အာရုံစိုက် လုပ်ဆောင်ပါလို့ ကျမအနေနဲ့ အကြံပြု လိုပါတယ်” ဟု မေလ ၁၀ ရက်နေ့က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
သြစတေးလျနိုင်ငံနှင့် သဘောတူထားသည့်အတိုင်း ရောက်ရှိလာမည့် ဒုက္ခသည်ခိုလှုံခွင့် လျှောက်ထားသူများကို ကောင်းမွန်စွာ ဆက်ဆံပါမည်ဟူသော မလေးရှား ဝန်ကြီးချုပ်၏ ကတိကဝတ်မှာ အာမခံချက်လုံးဝမရှိဟု မလေးရှားနိုင်ငံမှ လူ့အခွင့်အရေး တက်ကြွလှုပ်ရှား သူများကလည်း ပြောဆိုသည်။
မလေးရှား လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ကြီး တခုဖြစ်သည့် Suaram မှ စင်သီယာ ဂတ်ဘရီရယ်က ABC သတင်းဌာနသို့ ပြောကြားရာတွင် “အတိအကျ ပြဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေတခုအပြင် မလေးရှားအစိုးရက အဲဒီဥပဒေကို လုံးဝ လေးစားလိုက်နာပါမယ်ဆိုပြီး ကန့်သတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းဘောင် မရှိသမျှ ကာလပတ်လုံး ခိုလှုံခွင့် လျှောက်ထားသူတွေအတွက် လုံးဝ အကာအကွယ်ရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး” ဟု ဆိုသည်။
သြစတေးလျ ဂရင်းပါတီ၏ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ အထက်လွှတ်တော် အမတ် ဆာရာ ဟန်ဆန် ယန်း (Sarah Hanson-Young) ကလည်း မလေးရှား နိုင်ငံသည် စိတ်ပျက်ဖွယ် လူ့အခွင့်အရေး စံချိန်စံနှုန်းများ ရှိနေသည့် တိုင်းပြည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တိုင်းပြည်မဲ့သူများကို တရားမ၀င်နေထိုင်သူများဟု သတ်မှတ်ပြီး ကြိမ်ဒဏ်ပေးနိုင်သော တိုင်းပြည်ဖြစ်ကြောင်း ဝေဖန်ခဲ့သည်။
မစ္စ ဆာရာ ဟန်ဆန် ယန်း၏ ကြေညာချက်တွင် “ဒီအစီအစဉ်က နိုင်ငံတကာဥပဒေကို ချိုးဖောက်ရာ ရောက်တယ်ဆိုတာ ကျမတို့သိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအစီအစဉ်ဟာ ရွှေ့ပြောင်းအခြေချမှု အက်ဥပဒေနဲ့ ကိုက်ညီခြင်း ရှိမရှိဆိုတာ သက်သေပြဖို့အတွက် အစိုးရရဲ့ တာဝန်ဖြစ်နေပါပြီ” ဟု ဖော်ပြထားသည်။
သြစတြေးလျနိုင်ငံ ဆစ်ဒနီမြို့ရှိ ဗီလာဝုဒ် (Villawood) လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွင် ရောက်ရှိနေသည်မှာ ၂ နှစ်ကြာပြီဖြစ်သော ရိုဟင်ဂျာတဦးဖြစ်သူ ဆေယက် ကာစင်က သူသည် ဒုက္ခသည်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခြင်း ခံရသော်လည်း သြစတြေးလျတွင် နေထိုင်ရန် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ နောက်ခံသမိုင်းကြောင်း ရှင်းလင်းသည်အထိ စောင့်နေရကြောင်း၊ မလေးရှားနိုင်ငံသို့ ပြန်ပို့ခံရသည့် တခြား ခိုလှုံခွင့် လျှောက်ထားသူများ အတွက် စိုးရိမ်စရာကောင်းကြောင်း ပြောသည်။
“မလေးရှားမှာနေတုန်းက ကျနော်အဖမ်းခံဖူးတယ်။ အနည်းဆုံး ၁၀ ကြိမ်လောက် အချုပ်ကျဖူးတယ်။ အချုပ်ထဲမှာ အရိုက်လည်း ခံရတယ်။ ပြီးတော့ မလေးရဲတွေက ကျနော့်ကို လူမှောင်ခိုသမားတွေလက်ထဲ ရောင်းစားလိုက်တယ်။ ကျနော့်မိသားစုက ပိုက်ဆံနဲ့နောက်က လိုက်ရွေးရတယ်” ဟု အသက် ၃၈ နှစ်အရွယ် ကာဆင်က ဧရာဝတီသို့ တယ်လီဖုန်းမှတဆင့် ပြောသည်။
ကာဆင်သည် မြန်မာအာဏာပိုင်များ၏ ခွဲခြားဆက်ဆံမှု၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ထွက်ပြေးလာကြသည့် လူနည်းစု မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင် ရိုဟင်ဂျာများထဲမှ တဦးဖြစ်သည်။ ကာဆင်သည် ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ခွာလာပြီး မလေးရှားနိုင်ငံသို့ ခိုးဝင်ခဲ့သည်။
“ကျနော် အသက်ကိုစွန့်ပြီး လှေလေးတစင်းနဲ့ မလေးငွေ ၁၀၀၀၀ ကျော်ပေးပြီး သြစတေးလျကို လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ ဘယ်တုန်းကမှ ပညာသင်ကြားခွင့် မရခဲ့တဲ့ ကျနော့်သားသမီးတွေရဲ့ အနာဂတ်အတွက်ပါ” ဟု ကာဆင်က ပြောသည်။
မလေးရှားနိုင်ငံတွင် ယခုလက်ရှိ ရိုဟင်ဂျာ ၂၅၀၀၀ ခန့် ဒုက္ခသည်အဖြစ် နေထိုင်ခိုလှုံလျက်ရှိကြောင်း၊ မလေးရှားရှိ ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး (UNHCR) သည် ခွဲခြားမှုများကြောင့် တတိယနိုင်ငံ ခိုလှုံခွင့်ရရှိရန် မလွယ်ကူကြောင်း မလေးရှားအခြေစိုက် မြန်မာရိုဟင်ဂျာ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့မှ ကိုဇဖာဟာမက်က စွပ်စွဲထားသည်။
ထိုစွပ်စွဲချက်နှင့် ပတ်သက်၍ မလေးရှားရှိ UNHCR ရုံးသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းသော်လည်း သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများက ဖြေကြားခြင်း မရှိပေ။
Posted on May 14, 2011, in သတင်းကဏ္ဍ. Bookmark the permalink.	Leaveacomment.